थप ३५ हजार अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल भित्रिने तयारी – Nepal Press
थप ३५ हजार अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल भित्रिने तयारी
२०७८ जेठ ५ गते १८:१५
काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीसँगै अहिले अस्पतालमा अक्सिजन अभाव छ । यो अभाव टार्न निजी क्षेत्रले पनि सिलिन्डर खरिद गरेर सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले ९ हजार ८ सय ५ अक्सिजन सिलिन्डर र ५ हजार अक्सिजन व्याग नेपाल ल्याइरहेका छन् । सरकारले चीनबाट २० हजार, निजी क्षेत्रले ९ हजार ८ सय ५० र विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीले करिब ५ हजार अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउँदै छन् । सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न देशमा बसेका नेपालीले गरी करिब ३५ हजार अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन लागेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालायका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट १ हजार ३ सय अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइसकेको र अब बाँकी रहेको १८ हजार ७ सय अक्सिजन सिलिन्डर पनि आउने क्रममा रहेको बताए ।
गौतमले भने, ‘पहिलो पटक ५ सय र दोस्रो ८ सय गरी १ हजार ३ सय अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल आइसकेको छ । अब बाँकी रहेको सिलिन्डर पनि दैनिक रुपमा आउने छ ।’
व्यापारीले खरिद गरेको सिलिन्डर तातोपानी नाकामा ।
एभेरष्ट अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरेले ७ हजार ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट नेपाल ल्याउँदै छन् । सँगै ५ हजार अक्सिजन व्याग पनि ल्याउँदै छन् ।
घिमिरेले भने, ‘अक्सिजन सिलिन्डर अब १ /२ दिनमा नेपाल आइपुग्छ । ५ हजार अक्सिजन व्याग पनि आइपुग्दैछ आज नै नेपाल आइपुग्नेछ । चीनमा परल मूल्य र ढुवानी खर्च जोडेपछि मात्र नेपालमा बिक्री मूल्य भन्न सकिन्छ ।’
घिमिरेका अनुसार यसभन्दा पहिले नेपालमा अक्सिजन व्याग प्रयोगमा अएको छैन । अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने बिरामीले अक्सिजन मास्कको माध्यमबाट आफूसँगसँगै लिएर जान सक्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा पनि चीनबाट २ हजार ८ सय अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदै छन् । भोलि वा पर्सिमा ती सामग्री आइपुग्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसस्थाले गरी करिब ३५ हजार अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउँदै छन् । यो अभाव आएपछि धेरै हदसम्म अभाव टर्छ । नेपाल आइपुग्दा प्रति सिलिन्डर १३ हजार पर्न जान्छ ।’
प्रकाशित: २०७८ जेठ ५ गते १८:१५
One thought on “थप ३५ हजार अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल भित्रिने तयारी”
Ram Krishna parajuli says:
He vagwan yo manxe paani ishwor pokhrel ko phalano ho ki k ho 18000 oxygen cylinder tatopani nakama aako nai5days vaisakyo ufff guff paani kati Laguna sakeko k ?????(lato desh ma gado tanneri)